Archive du 20161230
Tamin�ity fitondrana ity Nandriaka ny ra, nirongatra ny fitsaram-bahoaka
Hivalona afaka 24 ora ny taona 2016. Nifamahofaho ny zavatra tsara sy ny ratsy. Samy nanana ny tombana sy ny fomba fijeriny ny isam-batan�olona. Raha mikasika ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-piarahamonina kosa dia azo sokajiana ho taona mainty ho an�ny Malagasy ity taona ity.
Fanonganam-panjakana Ao an-dapa ny mpivoy azy
Mipoitra tsikelikely ny vaovao manodidina ny serasera novoizina tamin�ny fesiboky amin�ny fisian�ny fikononkononana fanonganam-panjakana. Minisitra lahy iray tamin�ny tetezamita sy vazaha-gasy iray efa malaza ho mahay mamendrofendro sy milalao ny serasera amin�ny resaka fanonganam-panjakana no ao ambadika, mampivoy azy io.
Narson Rafidimanana Tanjona ny fampihavanana ny Malagasy amin�ny taniny
Hifarana ny taona, nohararaotina ny niresaka sy nakana ny hevitry ny minisitra eo anivon�ny fiadidiana ny Repoblika misahana ny tetikasan�ny filoham-pirenena, fanajariana ny tany sy fampitaovana Narson Rafidimanana ny amin�ny fananantany sy ireo olana misy.
Pasitera Mailhol � Izahay sisa ianteheran�ny fitondrana �
Manoloana ny fielezan�ny vaovao amin�ny tambajotran-tserasera izay mahavoatonontonona anarana olobe maromaro teo amin�ny tontolo politika sy manamboninahitra zandary sy miaramila ary koa ny filazana azy ireo fa hiaraka hanongam-panjakana amin�ny filoha mpanorina ny antokom-pivavahana Apokalipsy, ny pasitera Mailhol, dia nanambara ity mpitondra fivavahana ity fa tsaho kendrena hanenjehana ny tenany izany.
Kaominina Antananarivo Renivohitra Tsy nomen�ny Fanjakana �subvention� hatramin�izao
Nanao tomban�ezaky ny asa vitan�ny kaominina Antananario Renivohitra tamin�ity taona 2016 ity, sy ny paik�ady hiatrehana ny fampandrosoana amin�ny taona 2017 ny Ben�ny tan�na Lalao Ravalomanana ny alarobia 28 desambra nandritra ny fivoriana niarahany tamin�ny mpanolotsaina ary ny tale
Voahangy Rajaonarimampianina Mihetsiketsika
Omaly maraina no nahatazanana indray an-dRtoa Voahangy Rajaonarimampianina, vadin�ny filoham-pirenena nizara vatsim-pety ho an�ireo beantintra tezaina etsy amin�ny � Foyer de vie � Andrainarivo sy Ambohimanambola.
Miala tsiny ry Jean fa somary taratara ny fiarahabako anao tafavoaka avy any a ! Arahabaina aloha fa naman�ny afa-bela fa tsy nataon-dRaf�rsa sy ny ekipany in-droa nahita ny maizina toy ny tain�omby natsentsin-davabary e !
Mifarana ny taona Mibosesika ny mpisora-panambadiana
Farany vao menafify ! Tomefy olona teo amin�ny biraon�ny Boriborintany faha-IV Anosy omaly alakamisy farany amin�ity taona 2016 ity.
� Bord de la mer � - Mahajanga Fampiasana zaza tsy ampy taona amin�ny endriny vaovao
Zava-baovao eo amin�ny � Bord de la mer � nanomboka ny fialantsasatra lehibe teo ny fahitana ireo ankizy tsy ampy taona manosika fiara kilalao mitatitra ankizy toa azy ireo ihany manamorona ny sisin-dranomasina ao Mahajanga.
Atsipy ny teny �
Mahagaga ny fihetsiky ny olom-pirenena tsirairay avy manoloana izao fitsaram-bahoaka sy habibiana mitranga eto amin�ny firenena izao.